Dhaq dhaqaaqyadii Ganacsi ee Kismayo oo soo laabtay & Ciidamada DFS oo aan galin – SBC
Dhaq dhaqaaqyadii Ganacsi ee Kismayo oo soo laabtay & Ciidamada DFS oo aan galin
Dhaq dhaqaaqyadii ganacsi iyo isku socodka dadka ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose ayaa dib u soo laabtay ka gadaal hakad labadii maalin ee ugu dambeeyay uu kujiray.
Waxaa maanta la arki karay Dhaq dhaqaaqyadii caadiga ahaa ee dadka iyo gaadiidka ganacsi ee magaalada oo caadi ku soo noqday iyadoona ay dib u furayeen saaka dadka goobahooda ganacsi.
Waxay ka dambeysay hakadka galay ganacsiga iyo dhaq dhaqaaqii dadka markii ciidamo ka tirsan Dowlada Soomaaliya iyo Kuwa amisom ay magaalada ku soo qaadeen duulaan shacabka magaalada geliyay Cabsi dagaal oo dhexmara xoogaga magaalada Gacabka ku hayay iyo ciidankaasi.
Inkastoo ay jiraan dhaq dhaqaaqyo ay halkaasi ka wadaan ciidamada Soomaalida iyo Kenyatiga isugu jira ee ku sugan duleedyada magaalada ayaa hadana dadweynuhu waxay muujinayaan degenaansho,
Ciidamada Dowlada iyo kuwa Amisom ayan weli gudaha u soo galin magaalada Kismaayo waxaana magaaladu ay tahay mid uu shacabka un ku sugan yahay maadaama ay faarujiyeen xoogaga xarakada Alshabaab oo gacanta ku hayay .
Sikastaba ha ahaatee Dadweynaha magaalada Kismaayo ayaa dhowraya halka ay wax ku dambeyn doonaan iyo waxyaabaha ay soo kordhiyaan ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa Amisom oo la filayo in maalmaha soo socda ay gudaha u soo galaan magaaladaasi.